China PITA ụfụfụ Bọla igwe na-emepụta igwe na ngwa ahịa | FAYGO
FG usoro PITA karama ịkụ igwe
Ejiri igwe akụrụngwa a rụọ ọrụ na usoro nbudata karama. Ọ dabara na ụdị ọ bụla nke karama mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, karama carbonated na karama na-ekpo ọkụ. FG4 nwere modulu atọ: igwe mbuli elu, rụọ ọrụ na igwe anaghị anabata ya.
FG usoro karama ịfụ igwe bụ a kpamkpam ọgbọ ọhụrụ nke linear ịfụ igwe, oké ya elu na-agba, ala ike na ala abịakọrọ ikuku oriri, agba site magburu onwe Ọdịdị imewe, obere ohere na-arụ, obere mkpọtụ na elu kwụsie ike, ugbu kwekọrọ na mba ihe ọ beụ beụ maka ihe ọ sanụ sanụ. Igwe a na-ese onyinyo ọkwa kachasị elu nke igwe na-agba ọkụ. Ọ bụ ezigbo karama na-eme akụrụngwa maka ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ.
FG Usoro Ngwaahịa Uru
1. Servo na-akwọ ụgbọala na cam na-ejikọ ịfụ ngalaba:
The pụrụ iche cam na-ejikọ usoro integrates ije nke ebu-oghere, ebu-kpochidoro na ala ebu-ebuli n'otu ije, onwem na elu na-agba servo ịnya ụgbọ ala usoro nke ukwuu-ebelata okirikiri nke ịfụ na-amụba ikike.
2. Obere na-eme usoro kpo oku dị anya
Heater anya na kpo oku oven-agbada ka 38mm, jiri ya tụnyere ot kpo oku oven ọ na-azọpụta karịa 30% oriri eletrik.
Ejiri ya na sistemụ ikuku na ikuku na-ekpo ọkụ ọkụ, ọ na-eme ka okpomoku dị ọkụ na-adị mgbe niile.
3. Oru oma ma adighi ime uzo uzo
Site rotary na adụ preform uzo mmiri usoro, ọsọ nke prefom nri na-hụrụ n'aka ugbu, preform n'olu ọma na-echebe.
4. Modularized imewe ime
N'ịnabata modularized imewe echiche, na-eme ka ọ adaba na-eri-azọpụta maka mmezi na-agbanwe agbanwe akụkụ ahụ mapụtara.
Akpụzi nọmba (mpempe)
Max olu (ml)
Ogologo kachasị (mm)
Gburugburu karama max dayameta (mm)
Square karama max diagonal (mm)
Adabara karama olu (mm)
Max preform ogologo (mm)
Total nwụnye ike (kW)
Ike kpo oku ezigbo ike (kW)
Voltaji / ugboro ole (V / Hz)
Mmiri mmiri Pressure (mmanya)
Okpomọkụ ụkpụrụ nso (° C)
Mmiri ite Pressure (mmanya)
Igwe akụkụ (m) (L * W * H)
Machine arọ (n'arọ)
Nke gara aga: Plastic Crusher Machine
Osote: PPR igwe igwe
3 oyi akwa PERT (mama, UVH) anwụrụ mmepụta akara
1. Akpaka Bottling 3 na 1 ịnweta / ọcha Mmiri Na-ejuputa igwe na-etinye Rinsing / Njuputa / Capping 3-in-1 teknụzụ, njikwa PLC, Ihuenyo Aka, ọ bụ nke nri SUS304 nri.
2. A na-eji ya emeju ụdị mmiri na-abụghị carbonated, dịka mmiri mmiri, mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. mmiri ịnweta, mmiri iyi, mmiri flavored.
3. Ike imepụta ya na mbụ dị na 1,000-3,000bph, karama 5L-10L PET dị.